Iran: Bilaogera “Nanjavona” Sy Famonoan-tena Roa Nampahonena · Global Voices teny Malagasy
Iran: Bilaogera “Nanjavona” Sy Famonoan-tena Roa Nampahonena
Voadika ny 03 Oktobra 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, македонски, عربي, Español, srpski, English
Miantso fanadihadiana eo noho eo noho ny famonoan-tena nataona voafonja roa teo aloha sady akaman'i Kouhyar Goudarzi, mpamaham-bolongana sady mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona natoka-monina ao amin'ny fonjan'i Evin ao Teheran hatramin'ny nisamboran'ny sampam-pitsikilovana azy tamin'ny 31 jolay 2011, ny Fanantenana Iraisampirenena Mpiaro ny Zon'Olombelona.
Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny namany maro tamin'ny 31 jolay 2011 lasa teo i Goudarzi, ary anisan'izany koa i Behnam Ganji, 22 taona. Nohadihadian'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny naman'i Goudarzi iray hafa, Nahal Sahabi, 37 taona. Taorian'ny namotsorana an'i Ganji sy i Sahabi dia nifandimby namono tena ireo tamin'ny 1 Septambra sy 28 Septambra.
Na dia tokony tsy tokony hirona hamoron-tantara na idiran'ny resaka fihetseham-po aza ny anton'ny famonoantena, maro ny mpamaham-bolongana mihevitra fa ny zava-nihatra tsy zaka tamin'i Ganji tany am-ponja no nanosika azy hamarana ny fiainany. Heverina ho manana fifandraisana ara-pihetseham-po izy roa ireto ary nanaitra ny maro ny tantaran'izy ireo.
Nosafidian'ny [fa] mpamaham-bolongana Jahanzanan ho lohatenin'ny lahatsorany momba ity raharaha ity ny hoe “Ny Fahafatesan'ny Mpifankatia”. Mbola navoakan'i Masih Alinjead, mpanao gazety vehivavy, ihany koa ilay bolongana avy eo.
Alakamisy androany. Tia lehilahy antsoina hoe Behnam Ganji ny vehivavy iray antsoina hoe Nahal. Behnam indray naman'i Kouhyar, mpanao fihetsiketsehana sy mpiaro ny zon'olombelona, izay nosamborina niaraka taminy ary navotsotra avy eo. Tsy nisy fampahalalam-baovao nitatitra ny fisamborana an'i Behnam. Namono tena izy rehefa navotsotra… ary ankehitriny namarana ny fiainany i Nahal…. maro no maloiloy rehefa mandre ny voambolana hoe “sipa”… saingy hitako ny gazety sasany nitatitra fa “Namono tena nanaraka azy ny sipan'i Behnam”… Mandria ry tovovavy mahafatifaty…
Taorian'ny fahafatesan'i Ganji, dia nanoratra tononkalo tao amin'ny bolongany i [fa] Nahal ary nizara rohy tamin'ny lahatsary YouTube: Valsa Mariazin'i Eleni Karaindrou.
Niteny i Ensiloos :
Tena izay henjana indrindra ny tsindry nahazo an'i Behnam ka nahatonga azy nanaiky hiampanga an'i Kouhyar namany. Mbola any am-ponja i Kouhyar. Tanako ho tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'i Behnam sy i Nehal ny Repoblika Islamika.
Niteny i Crazy Freedom Fighter [Mpiady Tezitra ho amin'ny Fahafahana]:
Nanaitra ny maro tamintsika i Nehal amin'ny fatoriany. Mampahatsiahy amintsika rehetra ny lanjan'ny finamanana sy ny fitiavana izy.
Mbola any am-ponja i Goudarzi na dia tsy misy na inona na inona fantatra aza izay manjo azy sy ny zavamisy iainany any. Tamin'ny lahatsoratra farany nosoratany tao amin'ny bolongana tamin'ny 2009, efa niantso [fa] ho amin'ny fanafahana ny mpikatroka roa ihany koa na dia i Goudarzi tenany aza.
Azo sorohina ny famonoantena ary tokony hitady vonjy izay manana fihetseham-po te-hamono tena. Mihaino anao sy manome torohevitra anao ary afaka mifanampy aminao izay mahatsapa te-hamono tena sy izay manana krizy ara-pihetseham-po ny vohikala tahaka ny Suicide.org sy ny Befrienders Worldwide.
Arabia Saodita 5 andro izay
Iràna 2 herinandro izay